Ny loko mena dia omeo antso ho an'ny rojo sy firavaka hafa - video
Firavaka amin'ny vatohara
Ny loko maro dia manome azy manao antso ho an'ny rojo sy ny firavaka hafa. Ny haran-dranomasina mena dia sarobidy toy ny vatosoa. Indraindray antsoina hoe haran-dranomasina, tsy mitovy ny haran-dranomasina. Ny haran-dranomasina mena dia tsy fahita firy noho ny fanarenana loatra. Amin'ny ankapobeny, tsy azo ihodivirana ny hanomezana haran-dranomasina satria fanomezana izy ireo satria mihena amin'ny fihenjanana toy ny fiovan'ny toetrandro, fandotoana ary ny jono tsy azo antoka.
Heverina ho mineraly sarobidy foana ny Shinoa, efa ela no nampifandraisany tamin'ny haran-dranomasina mena ny haran-dranomasina mena sy ny halavan'ny lavarangana noho ny lokony sy ny fitovizany amin'ny anterona serfa. Nahatratra ny haavon'ny lazany indrindra nandritra ny Manchu na Qing Dynasty (1644-1911) rehefa saika natokana manokana ho an'ny fampiasan'ny emperora na amin'ny endrika varahara hasiana firavaka amin'ny fitsarana na amin'ny hazo mineraly madinidinika. Shanhu amin'ny teny sinoa no fantatra. Ny tambajotra haran-dranomasina maoderina ny Ranomasina Mediterane ka hatrany Qing China amin'ny alàlan'ny orinasa English East India Company. Nisy fitsipika hentitra momba ny fampiasana azy tamin'ny kaody naorin'ny Emperora Qianlong tamin'ny 1759.
Inona no atao hoe Coral?
Ny haran-dranomasina dia ny anvertebrate an-dranomasina ao anatin'ny kilasy Anthozoa ao amin'ny phylum Cnidaria. Matetika izy ireo dia miaina ao amin'ny zanatany amina polyps tsirairay mitovy. Ny karazan-dranomasina dia misy ny mpanamboatra vatohara manan-danja amin'ny mponina amoron-dranomasina sy ny kalsioma karbônina mba hanamboarana faribolana.
Ny vondrona vatohara dia zanatany polyps mitovy amin'ny karazam-piainana. Ny polyp tsirairay dia biby toa sakel izay fahita firy santimetatra ny savaivony ary santimetatra vitsivitsy ny halavany. Manodidina ny vavam-baravarana afovoan-trano ny andian-tranolay Exoskeleton dia esorina tsy ho eo amin'ilay fitoerana. Nandritra ny taranaka maro, ny fanjanahana dia namorona faribolana lehibe mampiavaka ny karazana. Ny lohany dia mitombo amin'ny alàlan'ny famerenan'ny polyps aseksual. Izy io koa dia mipoaka amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny fitsidihana: ny polyp amin'ny karazana mitovy dia mamoaka gametes miaraka amin'ny fe-potoana iray isaky ny alina mandritra ny volana feno.
Na dia afaka mahazo trondro kely sy plankon kely aza ny corals sasany izay mampiasa sela matevina eo amin'ny lavenon'izy ireo, ny ankamaroan'ny vato dia mahazo ny ankamaroan'ny angovo sy ny otany avy amin'ny dinoflagellates unicellular unicellular ao amin'ny genus Symbiodinium izay mipetraka ao anaty mony. Ireo dia fantatra matetika amin'ny hoe zooxanthellae. Mitaky tara-pahazavana izany ary mitombo amin'ny rano madio, tsy misy 60 metatra. Ny haran-dranomasina dia mpandray anjara lehibe amin'ny firafitra ara-batana misy ny haran-dranomasina izay mivelona amin'ny rano tropikaly sy subtropika, toa ny Great Barrier Reef miala ny morontsirak'i Queensland, Australia.
Ao amin'ny fanafody, ny solika simika simika avy amin'izany dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny homamiadana, SIDA, fanaintainana, ary amin'ny fampiasana fitsaboana hafa. Ny tenda vatany, ohatra, Isididae dia ampiasaina amin'ny famoronana taolana amin'ny olona. Coral Calx, fantatra amin'ny anarana hoe Praval Bhasma ao amin'ny Sanskrit, dia ampiasaina amin'ny rafi-drazana nentin-drazana indostrian'ny fitsaboana indiana ho famenony amin'ny fitsaboana ny aretina metabolika misy taolana mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny calcium. Tamin'ny fotoam-pivoriana mampivarahontsana azy, izay misy ny kalsioma karbônina malemy indrindra, dia natolony mba hampitony ny vavonin'ny vavonin'i Galen sy Dioscorides.
Coral avy any Tonizia
Mividiana haran-dranomasina voajanahary ao amin'ny magazay-anay
Izahay dia manao firavaka vita amin'ny haran-dranomasina toy ny peratra, kavina kavina, fehin-tanana, rojo na pendant.
Tags Coral, fôsily